CODE 3.0, nzira nyowani yekushanda neOffice Automation | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda emahara emahofisi mhinduro eGnu / Linux. Iyo inonyanya kuzivikanwa yeiyi LibreOffice, asi kune mamwe akawanda. Dambudziko razvino neaya mahofisi emahofisi ndiko kusakwanisika kwekushanda pamwe chete kuburikidza navo. Ndokunge, shanda uri kure uye ukwanise kugadzira zvinyorwa pakati pevashandisi vakati wandei.
Icho chinhu chakaoma kuwana asi hachigoneki. Collabora ndiyo yega yemahara hofisi suite inozivikanwa neiyi, yekudyidzana. Collabora yakavakirwa paLibreOffice, asi kusiyana neiyi, Collabora inoshandiswa muwebhu browser uye kwete pakombiyuta.
Collabora achangobva kuvhura vhezheni inonzi CODE inomirira Collabora online Development Edition, ndokuti, online vhezheni mukuvandudza. Iyi vhezheni ichangosvika vhezheni 3, ichipihwa zita rekuti CODE 3.0. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti hazvireve kuti iri vhezheni isina kugadzikana kana kuti haigone kushandiswa, zvinopesana.
CODE 3.0 ikozvino inowanikwa kune chero server uye yeakanyanya kufarirwa makore matekinoroji, seNextCloud, OwnCloud kana Pydio. Tinogona zvakare kuti uite iyo uye isai pane yedu komputa nekutenda kune docker tekinoroji. Iyi vhezheni nyowani inogadzirisa madhiragi akaonekwa uye anowedzera LibreOffice Rich kuhofisi suite.
Ichokwadi ndechekuti CODE 3.0 ingano inonakidza yeLibreOffice, nekuti Izvo hazvitibvumidze isu chete kugadzirisa uye kugadzira zvinyorwa zvemavara, maspredishiti uye mharidzo, asi zvakare zvinotibvumidza isu kuti tiite zvese izvi mune chero yewebhu browser, kubva kuFirefox ichangoburwa kuenda kuMidori, pasina matambudziko ekurodha kana kumhanyisa kwekushandisa. Chinhu chinoitika mune mamwe mahofisi ehofisi masutu senge Hofisi 365.
Nehurombo isu hatisi kuzowana maficha ane LibreOffice, senge LibreOffice Base kana LibreOffice Dhirowa, asi ichave iri nyaya yenguva pamberi pekuti mutsivi vhezheni dzeCODE 3.0 dzive neyekupedzisira. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CODE 3.0, nzira nyowani yekushanda neOffice Automation